Monday April 09, 2018 - 12:40:00 in Wararka by
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay markale ka dhaceen mid kamida deegaannada ay xoogga ku joogaan ciidamada shisheeyaha Kenya.
Dagaallada ayaa yimid kadib markii xoogaga Al Shabaab ay weerar xooggan ku qaadeen saldhigyo ciidamada Gummeysiga Kenya ay ka sameysteen deegaanka faxfaxdhuun.
Wariye ku sugan gobolka Gedo ayaa soo sheegay in dagaalka oo saacado badan qaatay ay ka qeyb galeen ciidamo aad u hubesyan oo katirsan Shabaabul Mujaahidiin, saldhigyada ciidamada Kenya ayaa la kulmay weeraro aad u xooggan.
Dad ku sugan deegaanka Faxfaxdhuun ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay, warar hordhac ah waxay sheegayaan in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah uu ciidamada Kenya kasoo gaaray dagaalka waloow illaa iyo hadda aan laheyn tirada ciidamada laga dilay.
Deegaanka Faxfaxdhuun ayaa qiyaasti 70 KM ujirta magaalada Baardheere oo sanaddii lasoo dhaafay 2017 ay isaga baxeen kumanaan katirsan ciidamada gummeysiga Kenya.